Global Voices teny Malagasy » Tonian-dahatsoratra Maraokana Nosamborina Fa Nandefa Lahatsarinà Mpampihoroho · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Septambra 2013 11:52 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian York Nandika avylavitra
Sokajy: Fisamborana sy faneriterena, Lalàna, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Ny lahatsoratra fototra niaingàna tamin'ity lahatsoratra ity dia nivoaka tao amin'ny bilaogy Deeplinks  an'ny Electronic Frontier Foundation.
Tato anatin'ny taona vitsy lasa, nahavita dingana goavana i Maraoka raha resaka fahafahana miditra amin'ny Aterineto ho an'ireo olom-pireneny miisa 32.5 tapitrisa. Teo anelanelan'ny 2008 sy 2013, niainga tamin'ny 10.2 tapitrisa ka tafakatra ho 17.8 tapitrisa ny isan'ny olona mampiasa Aterineto, nanosika ny firoboroboan'ny sehatry ny IT (teknolojian'ny fampahalalam-baovao) ao Maraoka . Namoaka vola tsy azo tsinontsinoavina ny governemanta Maraokana tamin'ny fampakàrana ny fahafahana miditra aterineto any an-sekoly ary nanitarana ny sehatry ny fitantanana ara-elektronika, na “e-government”. Tsy ela akory, ireo Maraokana tezitra tamin'ny famelan-tsazy nomen'ny mpanjaka an'ilay espaniola voaheloka noho ny resaka fanodinana zaza tsy ampy taona dia nahita olona marobe hanohana ny fanentanana tety anaty aterineto ho fitadiavana fanohanana,  izay niafara tamin'ny fanafoanan'ireo manampahefana ilay famotsoran-keloka sy nisamborana indray ilay nahavanon-doza. Io no voalaza ho fandresena voalohany azon'ny fanentanana natao tety anaty aterineto tamin'ny karazany toy izany tao amin'ny firenena.
Indrisy anefa, ary na teo aza ny fitaterana ny hoe fanamaivanana ny fanarahamaso/fanatatavanana ny tranonkala, nametraka fitaovana ihany koa ny governemanta Maraokana hikendrena ireo mpanao gazety sy ny tsy mitovy hevitra aminy. Tamin'ny taona lasa dia nahitàna fisondrotana raha resaka fisamborana ireo mpampiasa ny media sosialy , raha ilay vao haingana fotsiny, mpanao gazety iray no voampanga ho nanao heloka bevava nanàla baraka  noho ny tatitra iray momba ny kolikoly ataon'ny governemanta izay nahatohina minisitra iray manana toerana ambony.
Ilay lahatsary, izay notaterina fa hoe nesorina tao amin'ny Youtube noho ny fangatahan'ny manampahefana Maraokana  [ar], dia nanakiana ny mpanjaka Maraokana ary niantso ny tanora mba hiroso hanao jihad (ady masina). Araka ny Kaomity Miaro ny Mpanao Gazety , niteny ny lehiben'ny fampanoavana Maraokana fa heloka bevava ny famoahana ireo fampihorohoroana avy amin'ny Al-Qaeda ary ireo noharam-boina noho ny fanafihan'ny mpampihorohoro ao amin'ny firenena dia nitaky ny hanaovana fanadihadiana amin'ireo famoahana marobe izay nifandrohy tamin'io na namerina nandefa ilay lahatsary.
Araka ireo loharanom-baovao ao amin'ny firenena, voatàna ao Casablanca i Anouzla, ary hatreto dia tsy avela hihaona amin'ny mpisolovava azy. Tatitra iray avy amin'ny Amnesty International no nilaza fa  nahazo alàlana hitsidika azy ny mpisolovava azy tamin'ny herinandro lasa teo. Ny Didy Famaizana ao Maraoka dia manome alàlana ny manampahefana hitàna vonjimaika hatramin'ny roa ambinifolo andro ireo izay ahiahiana ho mifandray amin'ny resaka fampihorohoroana, ary manome alàlana ny tsy hifandraisany amin'ny mpisolovava ao anatin'ny enina andro.
Ny tantaran'i Maraoka tato ho ato dia tsy lany tranga tahàka ity iray ity, ka ao anatin'izany ny manampahefana dia mikendry mpanao gazety na trano famoahana iray noho ny fanorisorenana kely monja mba hahafahana mampangiana azy ireny. Tamin'ny 2007, ilay gazetiboky nitondra fijery sy fomba vaovao, Nichane, dia noraràna tsy hamoaka nandritra ny roa volana noho ny namoahany ireo amboaranà hadrohadro malaza eny amin'ny fiarahamonina, ny sasany tamin'ireny dia noheverin'ireo manampahefana ho manivaiva ny fitondrà-mpanjaka. Ary tamin'ny 2009, ny tranonkalam-baovao Akhbar Al-Youm dia noraràna  taorian'ny namoahany sariitatra iray notsarain'ny manampahefana ho manivaiva ny sainam-pirenena, ny tonian-dahatsoratr'io dia niharan'ny vesatra “nandoto ny sainam-pirenena” sy “tsy naneho fanajàna ny printsy.” Saingy angamba ny malaza indrindra dia ny tranga nahazo an'i Ahmed Benchemsi, ilay mpanorina ny Nichane sady tonian-dahatsoratra fahiny tao amin'ny TelQuel, izay nisafidy ny hanao sesitany ny tenany taorian'ny fahafatesan'ny gazetibokiny .
Na dia nahomby tamin'ny fanakatonana trano famoahana marobe aza ny governemanta nandritra ny taona maro, tsy nanam-bintana loatra nampangiana ny media sosialy ety anaty aterineto izy. Tamin'ny 2012, tao anatinà tafatafa iray niarahana tamin'ny mpiara-namorona ny Lakome sady mpanao gazety manana ny lazany Aboubakr Jamaï, i Hasna Ankal no mpametra-panontaniana niatrika ity olana ity tsy am-pihambahambàna , nanontany an'i Jamaï mikasika ny anjara raisin'ny gazety elektronika ao Maraoka. Namaly i Jamaï :
Tsy mora ny hoe mpanao gazety ao Maraoka. Araka ny Tondron'ny fahalalahan'ny Gazety  avy amin'ny Reporters Sans Frontières [sic] dia nikororosy ny fahalalahan'ny fanaovana gazety ato amin'ity firenena ity. Ny famonjàna ilay mpanao gazety, Rachid Nini , dia niteraka fahasimbàn'ny lazan'i Maraoka ho iray amin'ireo firenena isan'ny malalaka indrindra any amin'ny faritra misy azy. Nefa dia nampanantena fahalalahana bebe kokoa aza ny lalàm-panorenana vaovao ho an'ny media sy fahalalahana misimisy kokoa amin'ny fanehoana hevitra. Saingy ho an'i Jamaï, ny hany fahalalahana sisa tavela dia ny ety anaty aterineto.
Lakome, izay any Kanadà ny lohamilina mampiantrano ny tranonkalany, dia nanohana ny hetsika February 20  ho fanandratana ny demaokrasia, ny fanehoan-kevitra malalaka, ary ireo soatoavina hafa mitodika amin'ny fahalalahàna, ary dia lasibatra mora foana ho an'ny governemanta Maraokana araka izany. Etsy andaniny, ny sasany dia nitanisa ny tatitra “tonga lafatra” nataon'i Anouzla momba ny #DanielGate —ilay fampielezankevitra vao haingana nahitàna ny mpanjaka nisintona ny famotsoran-keloka efa nomeny an'ilay mpapnodina zaza tsy ampy taona – ho antony mitombina amin'ny nahatonga azy ho lasibatra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/29/52307/
 bilaogy Deeplinks: https://www.eff.org/deeplinks/2013/09/critical-moroccan-editor-arrested-linking-youtube-video
 firoboroboan'ny sehatry ny IT (teknolojian'ny fampahalalam-baovao) ao Maraoka: http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2012/02/06/feature-03
 dia nahita olona marobe hanohana ny fanentanana tety anaty aterineto ho fitadiavana fanohanana,: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2013/09/16/digital-citizen-1-1/
 fisondrotana raha resaka fisamborana ireo mpampiasa ny media sosialy: https://www.eff.org/deeplinks/2012/02/moroccan-activists-arrest-signals-crackdown-speech
 voampanga ho nanao heloka bevava nanàla baraka: http://cpj.org/2013/01/editor-charged-with-defamation-in-morocco.php
 notaterina fa hoe nesorina tao amin'ny Youtube noho ny fangatahan'ny manampahefana Maraokana: http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=182274&wss=1Y09io000101
 Kaomity Miaro ny Mpanao Gazety: http://cpj.org/2013/09/moroccan-editor-arrested-for-publishing-link-to-vi.php
 nilaza fa: http://www.amnesty.org/en/news/morocco-ali-anouzla-arrest-2013-09-18
 nisafidy ny hanao sesitany ny tenany taorian'ny fahafatesan'ny gazetibokiny: http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Benchemsi
 no mpametra-panontaniana niatrika ity olana ity tsy am-pihambahambàna: http://emajmagazine.com/2012/07/25/aboubakr-jamai-morocco-is-a-country-worth-following/
 Tondron'ny fahalalahan'ny Gazety: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
 famonjàna ilay mpanao gazety, Rachid Nini: http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/04/20124281889790655.html
 February 20: http://www.jadaliyya.com/pages/index/10514/moroccos-20-february-movement_two-years-later